Mgbatị ntutu ntutu nke Bradil Straight Girl - Soie ntutu Atlanta Mgbatị ntutu ntutu nke Bradil Straight Girl - Soie ntutu Atlanta
Mgbatị ntutu ntutu Bradil Brapụ n'ụzọ ziri ezi - Soie ntutu Atlanta - Mgbatị ntutu ntutu ruo mgbe ebighi-ebi
size 14 sentimita asatọ 16 sentimita asatọ 18 sentimita asatọ 20 sentimita asatọ 22 sentimita asatọ 24 sentimita asatọ 26 sentimita asatọ 28 sentimita asatọ
14 sentimita asatọ 16 sentimita asatọ 18 sentimita asatọ 20 sentimita asatọ 22 sentimita asatọ 24 sentimita asatọ 26 sentimita asatọ 28 sentimita asatọ
Ntutu VIRGIN Organic. Mgbakwunye ntutu ntutu anyị nke na-amaghị nwoke na Brazil bụ ogologo ndọtị ndị na-adịte aka sitere na ntutu isi mmadụ kachasị mma. Mgbakwunye ndị a na-ejide curls na agba nke ọma, na-adịgide ihe dị ka afọ 2 na nlekọta kwesịrị ekwesị.
ndị a Mgbatị ntutu nke Brazil na-anapụta India ozugbo. Ha bụ ụfọdụ n'ime ụdị ntutu kachasị dị mma n'ọma ahịa ma bụrụkwa ntutu dị mma. A na-egbute ngwa ahịa anyị niile na ebumpụta ụwa ha na nke ọ bụla na - esite n'aka ndị na - enye 1-2 iji hụ na agbanwe agbanwe.
100% ntutu isi na-amaghị nwoke na-acha odo odo #613 ntutu gbara agba